80W Industrial Led Wall Pack Lights 5000K China Manufacturer
Nkọwa:Mgbidi Wall Wall,Mgbidi Mgbidi Ọrụ,Mgbidi Mgbidi
Home > Ngwaahịa > Mgbidi Mgbidi > Ime Ụlọ Mgba > 80W Industrial Led Wall Pack Lights 5000K
Ihe Nlereanya.: BB-RSD-80W-B2
Bbier 80W Wall Pack ọkụ bụ nke na-egbuke egbuke aluminum, nke na-akụda na-eguzogide eguzogide, oke okpomọkụ ana-anwale ma nwee ike ijikwa ọnọdụ ihu igwe niile. Nke a na-eme ka anyị na- arụ ọrụ Wall Wall nke zuru oke na-eme ka ihe nkedo ọkụ maka ụlọ na ebe dị n'èzí. Ihe ngosi IP6565 na-eme ka a hụ Lamp anyị nwere ike iji ya mee ihe ọbụlagodi na oké mmiri ozuzo.
Dịlata ọkụ eletrik gị na-eri ego ruo 80% site na dochie 250 MH / HIP / HID bulbs na 80W I ndustrial Wall Lamb . Nchekwa ike na mgbidi ọkụ nkuku dị ogologo nke na-adịru ogologo oge na-eme ka ngwọta ọkụ na-enwu gbaa, nke dị nkọ ma dịkwuo mma. Nbunye dị nanị 15 nkeji maka oriọna mgbidi anyị .Akwado ọzọ maka nkedo dị mfe, ọ dịghị ihe ọ bụla ịkụ aka dị mkpa dị ka ndị ọzọ
Ngwaahịa : Mgbidi Mgbidi > Ime Ụlọ Mgba
100W N'èzí Led Wall Pack Light Fitting Kpọtụrụ ugbu a
80W Industrial Led Wall Pack Lights 5000K Kpọtụrụ ugbu a
55W Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị N'ugwurugwu Egwurugwu Kpọtụrụ ugbu a
35W N'èzí Led Wall Pack Na Photocell Kpọtụrụ ugbu a
100W Ngwá Ngwá Ngwá Agha Dị N'èzí Kpọtụrụ ugbu a
Mgbidi Wall Wall Mgbidi Mgbidi Ọrụ Mgbidi Mgbidi